LG gosipụtara ihe ngosi 43-anụ ọhịa nke nwere ọrụ dị egwu | Esi m mac
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Noticias
Firmlọ ọrụ Korea amalitela nyocha ọhụrụ ọhụrụ. Ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị 43 sentimita asatọ, n'ihu ụdị ndị ọzọ dị ka Phillips, onye kpebiri ịkwado Mac, ozugbo Apple kwụsịrị, ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, na telivishọn nke aka ya. Ezubere ya maka onye ọrụ a kapịrị ọnụ, ebe ọ bụ na ikekwe nke kachasị mkpa bụ nha ihuenyo ahụ. Nyochaa gosipụtara taa nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ site na LG, Ihuenyo IPS, ma nwekwara njikọ dịgasị iche na ikike ilele njikọ 4 n'otu oge.
Anyị na-aga n'akụkụ. Anyị na-ekwu maka ọkachamara nyocha nke 43 sentimita, Ike idi 4K. Dika umunne ya na klaasi tinye Teknụzụ IPS, nke na-egbochi nsị na ụcha ọkụ, ihe omume nke ga-eweda ogo oyiyi na nkọwa agba, ọkachasị na agba gbara ọchịchịrị. Teknụzụ ọzọ nke ndị “egwuregwu” ga - anabata nke ọma bụ Nkà na ụzụ FreeSync, na-ekwe ka ihuenyo a na-emelite mgbe niile iji zere jerks ma ọ bụ obere ihe oyiyi freezes. Agbanyeghị, ileba anya ahụ nwere ọrụ "ụlọ" dịka: Egwuregwu egwuregwu, Onye na-edozi nwa, na omume SMgbanwe di omimi.
Nke abuo. Ole na ole ndị nlele na ahịa ga-enye njikọta dị ka nyocha LG a. Anyị nwere ikike anyị nwere:
Abụọ HDMI 2.0 nwere ike ịrụ ọrụ na 4K na 60Hz,
Abụọ HDMI 1.4 na 4K mkpebi na 30Hz.
DisplayPort 1.2a nwere mkpebi 4K na 60Hz.
Ejikọtara ọdụ ụgbọ USB-C nke nwekwara ike ịkwado mgbaàmà DisplayPort.
Mana ọzọkwa, anyị nwere ike ịkpọtụrụ ntinye niile ndị a n'otu onyonyo ahụ, ya bụ, jiri anya nke uche hụ ihe anọ ahụ n'otu desktọọpụ. Ọbụna onyonyo ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onyonyo n'ime onyogho, nke anyị nwere site na MacOS Sierra. N’ikpeazụ, a gaghị enwe ike ịhapụ ụda ihe ileba anya a n’azụ. Ugwu okwu abụọ Harman Kardon nke 10w.
Anyị enweghị ule nke iji ihe nlele ahụ, mana anyị nwere olile anya na LG ga-emejupụta mmezi emere na nyocha 4k na 5k iji zere njehie n'ihi nnyonye anya, tumadi n'ihi akara ngosi Wifi. Amabeghị nkọwa nke ọnụahịa ya, mana dịka isi mmalite, a ọnụahịa dị n'etiti euro 600 na 700 dị ka isi mmalite ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » LG na-ewebata ihe ngosi 43-anụ ọhịa nwere atụmatụ dị egwu
8x32 Podcast: Ọkà okwu na Siri maka June
Apple gbatịrị akwụkwọ ikike Apple Watch ruo afọ atọ